Shower Chikamu Yekuchengetedza Girazi Fekitori | China Shower Chikamu Yekuchengetedza Girazi Vagadziri, Vanotengesa
Basic Info Smart yakatsvairwa girazi rekushambidza: Kudzora yako pakavanzika nyore Kubva ikozvino, zvese zvinotora ndiko kungwara kwekuchinja kuti ugadzire pachena mikova yako opaque masuo. Iyi smart yegirazi tekinoroji inoisirwa muzvigadzirwa zvedu kuti tikubatsire iwe kushandura chitarisiko chavo pane kudiwa. Kunyangwe iwe uchida kuvanda kubva pameso ekuchenesa kana kuita kuti mwenje upinde, unongodzvanya bhatani iro. Negirazi redu rakatsamwa rekushambidza madziro nemasuo, kuvanzika kwako kunogara kuchidzivirirwa! Uri kutsvaga girazi ku ...
Yakajeka / Yakadzika Iron Yakashatirwa Girazi YeShower Kamuri
Basic info Ngatizvitarisei izvi, gonhi rekushambidza haingori gonhi rekugezera, sarudzo yesitayera inoisa toni yekutarisa uye kunzwa kweimba yako yese yekugezera. Ndicho chimwe chete chikuru chinhu mumba mako yekugezera uye chinhu chinokwezva kutarisisa. Kwete izvozvo chete, asi zvakare inofanirwa kushanda nemazvo. (Tichataura pamusoro pazvo muminiti.) Pano paYongyu Girazi, tinoziva rudzii rwechimiro chinogona kugadzirwa nemusuwo wekushambidza kana kabhodhi. Isu tinoziva zvakare kuti kusarudza iyo yakakodzera chimiro, chimiro, uye ...
Smart girazi, iyo inonzi zvakare Inochinjika Yakavanzika Yegirazi, ndiyo mhinduro inoshanda zvakasiyana. Kune mhando mbiri dzegirazi dzakangwara, imwe inodzorwa nemagetsi, imwe inodzorwa nesora.
Smart girazi, iyo inonzi zvakare girazi rekudzora girazi, switchable girazi kana kuvanzika girazi, iri kubatsira kutsanangura zvivakwa, zvemotokari, zvemukati, uye zvigadzirwa zvekugadzira maindasitiri.
Zvakafanana Saizi: Pese pakurongeka
Mazwi akakosha: Pakarongeka
Kushanda: Kupatsanura, yekugezera mukamuri, mhanza, windows nezvimwe
Nguva yekutumira: vhiki mbiri
Yakadzvanywa / Yakasvibirwa Yakaomeswa Girazi YeShower Kamuri
Yekutanga info Yakatemwa Yekunzwa Girazi Kunyangwe kusarudza girazi rakacheneswa windows, masherufu, kana mahwendefa, kushandiswa kwegirazi rakatsamwa nguva dzose isarudzo. Iri girazi rakasimba uye risingapfuurire kupunzika pane zvinokanganisa. Girazi rinoratidzika rakafanana neyakajairwa mapani, zvichiita kuti rive sarudzo hombe kune avo vanoshuvira nekuda kwekuchengeteka pasina kushandura kutaridzika kweanenge ari muchirongwa ichi. Tarisa uone Yongyu Girazi 'rakakura kusarudzwa kweukobvu uye ruvara tint sarudzo kuti utange mukutora ...